पवित्र आत्माको काम तिमीहरूलाई पूर्ण रूपमा नयाँ राज्यमा ल्याउँदै निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ, जसको अर्थ यो हो कि यस राज्यको जीवनको वास्तविकता तिमीहरूको सामु देखा परेको छ। पवित्र आत्माले बोल्नुभएका वचनहरूले तेरो मुटु भित्रको गम्भीरतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट गरेको छ, र एक पछि अर्को स्वरूप तिमीहरूको सामु देखा पर्दैछ। सत्यताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू र अधीनमा बस्ने मनसाय भएका सबै सियोनमा रहनेछन् र नयाँ यरूशलेममा बस्नेछन्; मसँग हुँदा तिनीहरूले पक्कै पनि महिमा र सम्मान प्राप्त गर्नेछन् र सुन्दर आशिषहरू बाँड्नेछन्। हाल आत्मिक संसारका केही रहस्यहरू छन् जुन तिमीहरूले अहिलेसम्म देखेका छैनौ किनकि तिमीहरूको आत्मिक आँखा खुलेका छैनन्। सबै कुराहरू एकदम अचम्मका छन्; आश्‍चर्यकर्महरू र आश्चर्यका कामहरू र मानिसहरूले कहिल्यै सोच-विचार नगरेका कुराहरू पनि बिस्तारै प्रकट हुनेछन्। सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरले आफ्ना ठूला-ठूला आश्‍चर्यकर्महरू देखाउनुहुनेछ ताकि ब्रह्माण्ड र पृथ्वीको कुना-कुना र सबै राष्ट्रहरू र सारा मानिसहरूले आफ्नै आँखाले देख्‍न सकून्, र मेरो प्रताप, धार्मिकता, र सर्वशक्तिमान्‌ता कहाँ छ सो पनि देखून्। दिन नजिकै आउँदैछ! यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण हो: के तँ पछि हट्नेछस्, कि तँ कहिल्यै पछाडि नफर्किकन अन्तसम्म दृढ रहनेछस्? कुनै पनि व्यक्ति, घटना वा वस्तुलाई नहेर्; संसार, आफ्ना पति-पत्नी, आफ्ना बाल-बच्चा, वा जीवनप्रति आफ्‍ना शङ्काहरूलाई नहेर्। केवल मेरो प्रेम र कृपालाई हेर, र तिमीहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि मैले कति मूल्य चुकाएको छु त्यसलाई हेर। यी तिमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न यी कुराहरू नै पर्याप्त हुनेछन्।
समय धेरै नजिक छ, र मेरा सबै इच्छाहरूलाई सकेसम्म छिटो हासिल गरिनु पर्छ। मेरो नाममा हुनेहरूलाई म त्याग्ने छैन; म तिमीहरू सबैलाई मेरो महिमामा ल्याउनेछु। तैपनि अहिले यसलाई हेर्दा, यो महत्त्वपूर्ण क्षण हो; त्यो अर्को कदम चाल्न असमर्थ सबैले आफ्नो बाँकी जीवनको निम्ति विलाप गर्नेछन् र पछुतो महसुस गर्नेछन्, यद्यपि यस्तो भावनाको लागि ढीला भइसकेको हुनेछ। अहिले, मण्डली निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिन्न र तिमीहरूले एक-अर्काको आज्ञापालन गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ सो जान्‍नको लागि तिमीहरूको कदलाई व्यावहारिक परीक्षामा राखिएको छ। यस दृष्टिकोणबाट हर्दा, तेरो आज्ञाकारीतामा नै तैँले छनौट गर्छस् र चुन्छस्; तैँले एक व्यक्तिको आज्ञा पालन गर्न सक्षम भए पनि, अर्को व्यक्तिको आज्ञा पालन गर्न तँलाई गाह्रो हुन्छ। जब तँ मानव धारणाहरूमा भर पर्छस् तब वास्तवमा तँ आज्ञाकारी हुन सक्ने कुनै तरिका छैन। तैपनि, परमेश्‍वरको विचारहरू सधैँ मानिसको भन्दा श्रेष्ठ हुन्छन्! ख्रीष्ट पनि मृत्युसम्‍मै समर्पित हुनुभयो, र क्रूसमा मारिनुभयो। उहाँले कुनै पनि अवस्था वा कारणहरूको बारेमा केही भन्नुभएन; जबसम्म यो उहाँको पिताको इच्छा थियो, तबसम्‍म उहाँले राजीखुसीले आज्ञा पालन गर्नुभयो। तेरो आज्ञाकारिताको हालको अवस्था अत्यन्तै सीमित छ। म तिमीहरू सबैलाई भन्छु, आज्ञाकारीता भनेको मान्छेको आज्ञा पालन गर्नु होइन; बरु, यसको अर्थ त पवित्र आत्माको कामलाई पालन गर्नु र परमेश्‍वर स्वयमको आज्ञा पालन गर्नु हो। मेरो वचनहरूले तिमीहरूलाई भित्रबाट नवीकरण र परिवर्तन गर्दैछ; यदि यस्तो थिएन, भने कसको आज्ञा कसले मान्नेथियो? तिमीहरू सबै अरू मानिसहरूप्रति अनाज्ञाकारी छौ। तिमीहरूले यो पत्ता लगाउनै पर्छ—आज्ञाकारीता के हो र तिमीहरूले कसरी आज्ञाकारीताको जीवन जिउन सक्छौ। तिमीहरू मेरो अगाडी अझ बढी आउनुपर्छ अनि यस विषयमा सङ्गति गर्नुपर्छ, त्यसपछि बिस्तारै तिमीहरूले आफ्‍ना भित्री धारणा र छनौटहरूलाई त्याग्दै यसलाई बुझ्न थाल्‍नेछौ। जुन तरिकाले म कार्यहरू गर्दछु त्यसलाई राम्ररी बुझ्‍न मानिसहरूलाई गाह्रो हुन्छ। यो कुन तरिकामा मानिस राम्रो वा सक्षम छ भन्‍ने बारेमा होइन; म परमेश्‍वरको सर्वशक्तिमान्‌तालाई देखाउन सबैभन्दा अज्ञानी र सबभन्दा तुच्छलाई पनि प्रयोग गर्दछु, यसको साथै केही मानिसहरूको धारणा, विचार र छनौटहरू उल्टाउँछु। परमेश्‍वरको कार्यहरू आश्चर्यजनक छन्; तिनीहरू मानव दिमागको ज्ञानको क्षमताभन्दा बाहिर छन्!
यदि तँ वास्तवमै मेरो लागि साक्षी बन्न चाहन्छस् भने तैँले सत्यतालाई गल्तीपूर्ण रूपमा होइन तर शुद्ध रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। तैँले मेरा वचनहरूलाई अभ्यास गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, र आफ्‍नो जीवन छोटो समयमै परिपक्व बनाउन खोज्नु पर्छ। कुनै मूल्य नभएका थोकहरूको खोजी नगर्; तिमीहरूको जीवनको प्रगतिमा तिनको कुनै फाइदा छैन। तिमीहरूको जीवन परिपक्व भएपछि मात्र तिमीहरूलाई निर्माण गर्न सकिन्छ; त्यसपछि मात्र तँलाई राज्यमा ल्याउन सकिन्छ—यसलाई नकार्न मिल्दैन। म अझै पनि तँसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु; मैले तँलाई धेरै दिएको छु, तर वास्तवमा तैँले कति बुझ्छस्? मैले भनेको कति कुरा तेरो जीवनको वास्तविकता भएको छ? मैले भनेको कति कुराहरूमा तँ जिइरहेको छस्। डोकोले पानी उघाउने प्रयास नगर्; तैँले अन्त्यमा शून्यता बाहेक केही पनि प्राप्त गर्नेछैनस्। अरूले अत्यन्तै सजिलो गरी वास्तविक लाभ प्राप्त गरेका छन्; तेरो के छ? के तैँले निःशस्त्र र कुनै हतियार नबोकी शैतानलाई हराउन सक्छस्? तैँले जीवनमा मेरा वचनहरूमा अझै बढी भर पर्नु पर्छ, किनकि तिनीहरू आत्मरक्षाको लागि उत्तम हतियारहरू हुन्। तैँले एउटा कुरा याद राख्नु पर्छ: मेरा वचनहरूलाई तेरो सम्पत्तिको रूपमा नलिनू; यदि तैँले ती बुझ्दैनस् भने, तिनको खोजी गर्दैनस् भने, यदि तँ तिनलाई पत्ता लगाउन वा तिनको बारेमा मसँग कुराकानी गर्न कोसिस गर्दैनस् तर यसको सट्टामा आत्मसन्तुष्टि र आत्म-प्रसन्‍न छस् भने, तैँले नोक्सान भोग्नुपर्नेछ। अहिले तैँले यो पाठबाट सिक्नुपर्दछ, र तैँले आफैलाई अलग राख्नुपर्छ र आफ्नो कमी-कमजोरीहरूलाई पूरा गर्न अरूको सामर्थ्यलाई तान्नु पर्छ; आफूले चाहे अनुसार जेसुकै नगर्। समयले कसैलाई पर्खँदैन। तेरा दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूको जीवन दिनदिनै वृद्धि हुँदैछ; तिनीहरू सबैले दैनिक रूपमा परिवर्तन र नवीकरणलाई अनुभव गरिरहेका छन्। तेरा दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूको शक्ति बढ्दै छ, र यो एउटा ठूलो कुरा हो! अन्तिम रेखामा दौडी; कोही कसैका लागि पनि उपस्थित हुन सक्षम हुनेछैनन्। मसँग सहकार्य गर्न तेरा आफ्नै व्यक्तिपरक प्रयासहरू लगा। जोसँग दर्शनहरू छन्, अगाडि जाने बाटो जसको छ, जो निराश छैनन्, र जो सधैँ अगाडि हेर्छन्, उनीहरू विजय हुने निश्चित छ। यो महत्त्वपूर्ण क्षण हो। निरुत्साहित वा निराश नहुने प्रति निश्चित बन्; तैँले सबै कुराको लागि अगाडि हेर्नुपर्छ, र पछाडि फर्कनु हुँदैन। तैँले सबै कुरा बलिदान दिनुपर्छ, सबै आकांक्षा त्याग्‍नुपर्छ, र आफ्‍ना सबै शक्तिसाथ प्रयास गर्। जबसम्म तँमा एक सास रहन्छ, तबसम्‍म तँ अन्तसम्म दृढ रहनुपर्छ; तँ प्रशंसायोग्य हुने तरिका यही मात्रै हो।